जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र सजायको व्यवस्था : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारजबरजस्ती धर्म परिवर्तन र सजायको व्यवस्था
धर्म सत्य हो, धर्म प्रेम हो र धर्म जीवन दर्शन पनि हो । कुनै चिजवस्तु र व्यक्तिमाथि राम्रो पुण्यकर्म र विचारका लागि विश्वास गरिने आस्था नै धर्म हो । अर्थात्, स्वर्ग प्राप्तिका लागि गरिने लोकविश्वास प्राप्त असल कार्य नै धर्म हो । हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने धार्मिक कार्यका लागि कुनै योग्यता वा अनिवार्य मापदण्ड भने छैन । कसैका लागि बाध्यकारी नभएको धर्म मानिसले आफ्नो इच्छाअनुसार मान्न पाउनु उसको अधिकार हो । आआफ्नै मान्यता र इज्जत हुने हरेक धर्मप्रति घृणा-विद्वेष फैलाउने र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने÷गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय छ ।
मानिसले हिन्दु, बौद्ध, इसाई, इस्लाम, यहुदी धर्म मान्दै आएका छन् । व्यक्ति आफ्नो इच्छाअनुरूप जुनसुकै धर्म पनि मान्न स्वतन्त्र छ । राज्यले यही धर्म मान्नुपर्छ भनी बाध्य गराउन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल एक धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ भन्नुको अर्थ पनि यही हो । सबै धर्मले सबैको हित भलाइकै कुरा गरेका हुन्छन् । तथापि, विश्वमा धर्मकै नाममा ठूलाठूला हिंसा हुन गई लाखौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा धर्मलाई हितभन्दा पनि स्वार्थका खातिर अंगीकार गरेबाट यसो हुन गएको देखिन्छ । धर्ममा मानवीय मूल्य, मान्यता एवं संस्कार र संस्कृतिका साथै नैतिक्ता र असल आचरण जोडिएर आएका हुन्छन् । त्यसैले पनि आफ्नो मानिआएको धर्म बचाउनु हाम्रो क्र्तव्य हुन आउँछ । अन्यथा आफ्नो पहिचान एवं इतिहासका गाथा र अस्तित्व पनि समाप्त हुन सक्छ ।
हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार आस्थाअनुसारको धर्म अवलम्बन र संरक्षण गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ भनी नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २६ मा छुट्टै धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । आफूलाई मन लागेको जुनसुकै धर्म मान्न पाउने अधिकार सबैलाई भएकाले अरूको धर्मप्रति आघात पार्नेगरी कुनै काम कुरा गर्नुहुँदैन । साथै, जबरजस्ती अरूले मानिरहेको धर्म परिवर्तन गराउनु पनि हुँदैन । तर, इसाई धर्मका प्रचारकले नेपालीको सीधापन, उदारता र गरिबीको फाइदा उठाएर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् । गरिबलाई पैसा बाँड्ने, छोराछोरीलाई पढाइदिने, सहयोग गर्ने आदि नाममा क्रिस्चियन धर्म मान्न बाध्य पारिरहेका छन् । क्रिस्चियनबाहेक अन्य धर्म मान्नेको घर कोठामा जाने क्रिस्चियन धर्ममा लाग्न बाध्य बनाउने गरिरहेका छन् । पूजापाठ नगर्न, ढुंगा पूजा नगर्न भन्दै हिन्दू धर्मप्रति गलत अफवाह फैलाइरहेका छन् । बाटोमा हिँडिराखेका सर्वसाधारणलाई समेत अल्मल्याई हातमा बोकेको बाइबलका पाना पल्टाएर पढ्न थाल्छन् । यसरी इसाइ धर्म प्रचारकले अन्य धर्म मान्नेप्रति घृणा र द्वैष फैलाई लोभलालच देखाएर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराई क्रिस्चियन धर्म मान्न बाध्य पारिरहेका छन् ।
धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिमाना गरिने व्यवस्था छ
नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा (३) मा ‘आफ्नो धर्मबाहेक अर्काको धर्ममा खलल पु¥याउने या जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न गराउन हुँदैन, त्यस्तो कार्य गरेमा दण्डनीय हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १५८ (१) मा ‘कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन’ भनिएको छ भने १५८ को देहाय (२) मा कसैले कसैको जातजात वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म वा आस्थामा खलल पार्नेगरी कुनै काम व्यवहार वा खलल हुने कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म प्रचार गर्न हुँदैन यदि कसैले उल्लिखित कसुर गराएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई उक्त संहिताको दफा १५८ को देहाय (३) बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने भनी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यदि त्यस्तो कसुर गर्ने÷गराउने व्यक्ति, पीडक, विदेशी नागरिक रहेछ भने त्यस्तो विदेशीको हकमा भने दफा १५८ को देहाय (४) बमोजिम माथि उल्लिखित कैद वर्ष पाँच भुक्तान भइसकेपछि कैद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाइसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तर, साबिक मुलुकी ऐन अदलको महलको १ नम्बरमा अरूको धर्ममा खलल पर्नेगरी कसैले कुनै पनि धर्म प्रचार गर्न कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन हुँदैन । सो कुराको उद्योगसम्म गरेको भएमा तीन वर्षसम्म कैद र धर्म परिवर्तन नै गराइसकेको रहेछ भने ६ वर्षसम्म कैद गरी विदेशी नागरिक भए सजाय भोगिसकेपछि निजलाई नेपाल बाहिर निकाला गरिदिनुपर्छ भनी उल्लेख भएता पनि विदेशीको हकमा कति दिनभित्र देश निकाला गरिसक्नुपर्ने सोबारे यति दिन भनी समयको किटान नभएको र हालको मुलुकी अपराधसंहितामा उद्योगअन्तर्गत छुट्टै कैदको व्यवस्था नभएको र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएमा साबिक मुलुकी ऐनमा भन्दा एक वर्ष कम गरी पाँच वर्ष मात्र सजायको उल्लेख गरेको छ ।
यसरी, अरूले मानेको धर्मप्रति आँच आउने कुनै काम कुरा गरे वा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने गराउनेउपर सजायको कानुनी व्यवस्था भए तापनि सो कुरा व्यवहारमा कति पनि लागू हुन नसकी कानुनमा मात्र सीमित रहेको छ । इसाई धर्म प्रचारकले खुलेआम क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरी क्रिस्चियन धर्म मान्न बाध्य पारी जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहँदा पनि यसतर्फ राज्य पटक्कै संवेदनशील बनेको पाइँदैन । कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष मजबुत हुनुपर्दछ ।
धर्म परिवर्तनबारे नबुझी गलत आश्वासन र झुटा कुराको विश्वासमा परी होस् या अज्ञानतावश आफ्नो परापूर्वकालदेखि मानी आएको धर्म परिवर्तन गरी क्रिस्चियन धर्ममा लागेकाको पीडा भने कम छैन । दोलखातिरका तामाङ थर गरेका श्रीमान्÷श्रीमतीका ४ वर्षका एक छोरा थिए । श्रीमान् ज्याला मजदुरी गर्दथे । श्रीमती दिनभरि कोठामा बसिरहने हुँदा क्रिस्चियन उनको कोठामा आउनेजाने गर्दागर्दै श्रीमतीलाई धर्म परिवर्तन गराई क्रिश्चियन बनाए पनि श्रीमतीले श्रीमान्लाई पनि क्रिस्चियन बन्न बारम्बार दबाब दिँदा श्रीमान् क्रिस्चियन नबन्ने भएपछि उनीहरूबीच धर्मको विवादका कारण आखिर अदालतमा गई पतिपत्नीको सम्बन्ध विच्छेद नै गर्नुप-यो ।
त्यस्तै, अर्की विवाहित महिला हिन्दू धर्म त्यागी क्रिस्चियन भएपछि अब संसार ध्वस्त हुन्छ । सम्पत्ति राख्नुहुँदैन । भएको जग्गाजमिन बेचेर चर्चमा बुझाउनुपर्छ भनी पास्चरले भनेकाले भएको घरजग्गा जमिन सबै बेची चर्चमा रुपैयाँ बुझाइन् । त्यस्तै, भर्खर विवाह गरेका जोडीलाई अब संसार ध्वस्त हुन्छ । सन्तान जन्माउनुहुँदैन भनी पतिपत्नीलाई स्थायी बन्ध्याकरण गराई निःसन्तान गराएको कुरा पीडितले मिडियामा बोलेका थिए । त्यस्तै, ललितपुरका एक जना पास्चरले त धर्म परिवर्तन गरी क्रिस्चियन भएमा बिमार निको हुन्छ भनी क्रिस्चियन बनाएपछि महिलालाई यौन शोषणसमेत गरेकोमा त्यस्ता पास्चरलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको कुरा पत्रपत्रिका र सञ्चार मिडियाबाट बाहिरिएको थियो ।
नेपालीको सिधापन, उदारता र गरिबीको फाइदा उठाएर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्
जे होस्, नेपालमा तीव्र रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ र आफ्नो परम्परादेखि मानिआएको धर्म त्यागी क्रिस्चियन धर्म बनाइएकामाथि चर्चभित्रैबाट विभिन्न प्रकारले शोषण भई उनीहरू पीडित भएको कुरा बेलाबेलामा पीडितले मिडियामा बोलेका कुराले प्रस्टै हुन्छ । मानिसले धर्म परिवर्तन गरी क्रिस्चियन धर्ममा लाग्नुको कारणमध्ये एक कारण गरिबी पनि हो । मानिसलाई गरिबी, पछौटेपनले गाँजेको छ । छोराछोरीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिलाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा क्रिस्चियनले उनीहरूलाई सहयोग गरी मन जित्छन् अनि उनीहरू बाध्य भई धर्म परिवर्तन गर्छन् । यसर्थ, सरकारले गरिब र विपन्न परिवारमा आर्थिक सहयोग गरी उनीहरूको छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्दछ र इसाई धर्म के हो ? नेपालमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन किन गराइँदै छ ? उनीहरूको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्नेबारे प्रत्येक टोलटोलमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरिनुपर्दछ । अनि, विभिन्न धार्मिक सभा, सम्मेलन र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट दिनकै लाखौंलाख उठेको भेटीको १५ प्रतिशत मात्रै गरिब र विपन्नता भएका मानिसका परिवारको हकमा रकम छुट्याए उनीहरूलाई ठूलो राहत हुन्छ । जसले गर्दा गरिबीका कारणले मानिसले आफ्नो धर्म परिवर्तन गरी क्रिस्चियन धर्म मान्न नपरोस् ।
यसर्थ, राज्य धर्मको विषयमा गम्भीर हुनुपर्दछ । आज सहरदेखि गाउँगाउँसम्म हजारौंको संख्यामा चर्च धमाधम बनिरहेछन् । गरिबी र बेरोजगारको कारणले आफूले परम्परादेखि मानी आएको आफ्नो धर्म त्यागी क्रिस्चियन हुनेको संख्या भयावह किसिमले वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यस्ता धर्म प्रचारक इसाईलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई धर्मको रक्षा गर्नुपर्दछ र बाइबलको ठेली बोकी घरघर र टोलटोलमा आई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन खोज्ने क्रिस्चियनदेखि हामी आफंै पनि सजक बनौं ।